Angicabangi Ukuthi Ukumaketha Kumayelana Nokwenza Imali | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 5, 2018 Douglas Karr
Uma kunamagama amabili engiwabona kule mboni angenza ngibubule ngihambe, yinkulumo ukwenza imali. Angifuni ukungena kwezepolitiki zakamuva, kepha inkampani yathatha isinqumo sokuqalisa umkhankaso wokumaketha onempikiswano. Omunye wozakwethu uthe bekungukukhangisa okuhle ngoba kuzobenza ithani lemali.
Bheka, bayinkampani futhi bangenza noma yini abangathanda ukuyenza ngokukhangisa kwabo. Futhi ukugxumela empikiswaneni ethandwayo kungaba kuhle ezinhlamvini zamehlo ngisho nezimpawu zamadola. Kepha angikholwa ukuthi inhloso yokumaketha ukwenza imali. Ngisebenze ezinkampanini eziningi ebezikhuluma ngokwenza imali, futhi ziyahlupheka noma zifile - ngoba ukwenza imali kwakuyimethrikhi ebaluleke kakhulu.
Amaphephandaba - Ngangisebenza emaphephandabeni ayengawodwa ekukhangiseni futhi ngaqhubeka nokukhuphula amanani abo. Izindaba zaba "ukugcwaliswa phakathi kwezikhangiso". Lapho ukuncintisana kufika ku-inthanethi, abathengi nabakhangisi bebengalindi ukweqa umkhumbi.
SaaS - Ngisebenzele enye yeSoftware enkulu njengabahlinzeki Bensizakalo embonini. Ekushisekeleni kwabo ukushaya amagoli njalo ngekota, ngangiwabuka enyakazisa amaklayenti bese ngiwagijimisela iklayenti elilandelayo elibaluleke kakhulu. Lapho abasunguli bethula ukuqala kwabo kwesikhathi esizayo, lawo maklayenti amadala awazange aluphendule ucingo. Futhi lapho kutholakala izixazululo ezintsha, amaklayenti akhohliwe afuduka.
Ukwenza imali kuyinjongo yesikhashana esusa ukugxila kuyo yonke into edingekayo ukwakha ibhizinisi elichumayo. Imali yiyona eshintshaniswa phakathi kwenkampani namakhasimende ayo ngenani elilethayo. Imali ibucayi - khokhisa kakhulu futhi ikhasimende lakho lingazizwa likhishwe futhi lihambe. Uma ungakhokhisi ngokwanele, ungahle ungakwazi ukukhokhela ikhasimende ngendlela efanele. Imali iyahlukahluka… kepha ukwakha ubudlelwano obuqinile yikhona okubucayi.
Ukumaketha kudlala indima ngokuzama ukuthola, ukukhomba, nokukhomba abathengi abazoba kudingeka umkhiqizo wakho noma insizakalo futhi ebukeka njengamakhasimende akho amahle kakhulu. Njalo ngesonto ngihamba kude namadili lapho ngikholwa ukuthi angikulungele ukusebenza nenkampani. Ezinye izinkampani zize zicasuke ngokuthi ngeke ngizisize - kepha ngiyazi ukuthi umgomo wesikhashana we ukwenza imali kucishe kwacekela phansi ibhizinisi lami esikhathini esedlule. Lapho ngithola ikhasimende elifanele, ngalinda ngesineke ukuthi ngisebenzisane nabo, ngibeke okulindelwe okufanelekile, futhi ngaqinisekiswa ukuthi badinga futhi bafuna imikhiqizo yami nezinsiza… kulapho-ke lapho sakhe ubuhlobo.
Ake ngibeke izibonelo ezimbalwa lapho:
Ngisiza i- inkampani eqoqa imali lokho kusebenza nezikole njengamanje. Babenokukhula okumangalisayo eminyakeni embalwa edlule ebengibasiza - kodwa kungenxa yokuthi bagxile kakhulu ekutheni izikole ezifanele basebenze nobani. Bayakugwema ukusebenza ezikoleni lapho umkhiqizo wabo ungadala ukungqubuzana phakathi kwabafundi… futhi, esikhundleni salokho, basekela lezo zikole ngomusa wabo. Bangakwazi ukwenza imali ngokubathengisela? Impela… kepha bayazi ukuthi akusona esasizuzisa isikole.
Ngisiza i- inkampani yedatha yedatha owenza izinto ezintsha futhi ozimele. Bangenza imali ngokuthengisa ukuzibandakanya okuncane unyaka wonke… kunenzuzo enkulu esikhathini esifushane. Kodwa-ke, bayazi ukuthi amakhasimende amakhulu, amabhizinisi anezinselelo zokuthobela kulapho akhanya khona. Ngakho-ke, bathengisa amabhizinisi amakhulu futhi bagweme ukumaketha ezinkampanini ezincane.
Ngisiza i- imisebenzi yasekhaya ibhizinisi elenza ukufulela, ukugoqa, nezinye izinsizakalo zangaphandle. Bayibhizinisi lomndeni ebeliseduze cishe iminyaka engu-50 emphakathini. Umncintiswano wabo wenza izethembiso futhi ushiya umkhondo wokuzibandakanya kabi ngokusebenzisa ukuthengisa okunzima futhi bacindezele wonke amakhasimende avale noma i-upsell. Iklayenti lami likhetha ukusuka kulokho kuhlanganyela futhi, esikhundleni salokho, lithengisele abangane, umndeni, nomakhelwane bamakhasimende abo.
Ngisiza i- ukuhlolwa kwamanzi ibhizinisi inhloso yalo yokuqala kwakuwukusiza abathengi ukuthi bahlole ikhwalithi yabo yamanzi ngamakhithi asekhaya. Kodwa-ke, bakhombe inkinga enkulu kakhulu lapho omasipala bengenayo isoftware yokulandela ngomkhondo ukuhambisana ngokugcwele nemithetho yendawo, yezwe neyenhlangano. Bebazi ukuthi bangaba nomthelela omningi kakhulu ngenhloso yabo yokusiza ukushintsha ikhwalithi yamanzi ezweni uma bethembela futhi begxile isikhathi eside ezinkontilekeni zikahulumeni.
Kuwo wonke la macala, asibhekile kuwo ukwenza imali. Imizamo yethu yokumaketha ukwengeza nokufanisa imikhiqizo nezinsizakalo zamabhizinisi esiwasizayo kulabo abazoba amakhasimende abangawahlinzeka. Zonke lezi zinkampani zinokukhula okuhle, kodwa kungenxa yokuthi ziyazi ukuthi kufanele ziyeke nini ukwenza imali… zingayilandeli.
Noma imuphi umakethi angasiza inkampani ukwenza imali. Bambalwa abathengisi abasiza amabhizinisi ukuba achume futhi akhule namakhasimende ayazisayo imikhiqizo nezinsizakalo zawo. Eminyakeni eyishumi edlule nginebhizinisi lami, ngithole ukuthi empeleni imali iza ngomphumela wokuthola nokusebenza namakhasimende afanele. Ukumaketha kwami ​​ukuthola lezo zinkampani, hhayi ukufuna nokwenza imali. Ngethemba ukuthi lokho nawe uzogxila kukho.
Tags: ukwenza imalimarketingimali